Isakhelo sesithethi se-IKEA SYMFONISK, isandi esingcono kunye noyilo ngakumbi | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | 04/08/2021 15:00 | ngokubanzi, Reviews
IKEA, Njengoko usazi kakuhle kuba sizise apha uhlalutyo lolu hlobo lwesixhobo, kudala sisebenza njenge-Sonos, inkampani yaseNyakatho Melika egxila kwisandi esikrelekrele kunye esingenazingcingo. Ngale ndlela, abaseSweden kunye nabantu baseMntla Melika benze imveliso entsha edibanisa eyona IKEA kunye netekhnoloji efanelekileyo. premium de UNonos.
Sihlalutye isakhelo sesithethi se-SYMFONISK esivela kwi-IKEA ngentsebenziswano yayo kunye no-Sonos, ukutsiba okukhulu kumgangatho wesandi namandla, uphawu lwendlu. Fumanisa kuthi uhlalutyo olunzulu ngesi sixhobo esithimba ukujonga okuninzi.
Njengamaxesha onke, sihamba kunye nohlalutyo olunzulu kunye nevidiyo evela kwisitishi sethu se YouTube, kuyo uya kuba nakho ukuxabisa kuqala i-unboxing epheleleyo kunye nenkqubo yoqwalaselo, njengoko kuhlala kusenzeka kwizixhobo zeSonos kulula. Thatha ithuba lokurhuma kwaye usishiyele uluvo lwakho kwaye ubhalise, kuphela emva koko sinokuqhubeka nokuzisa owona mxholo ubalaseleyo kwiGadget yeActualidad.
1 Izinto kunye noyilo: IKEA engaphezulu kuneSonos
2 Isandi: I-Sonos engaphezulu kwe-IKEA
3 Unxibelelwano kunye nolawulo lokusetyenziswa
4 Amava kunye nezimvo zoMhleli
Izinto kunye noyilo: IKEA engaphezulu kuneSonos
Ukujonga okokuqala kwi-unboxing kwaye siyaqonda ukuba i-IKEA iyile ibhegi phantse ngokukodwa kwesi sixhobo, akumangalisi ukuba ibhokisi yayo inkulu. Ngaphandle kwento esinokuyilindela, ubuncinci ukupakishwa kubonisa ukuba uSonos uyenzile into kwaye amava afana nalawo amanye iimveliso zawo. Nje ukuba siphume ngaphandle, sele sinesandisi-lizwi ezandleni zethu esothusayo ngobuncinci bayo kunye nobukhulu bayo obusebenzayo: 41 x 57 x 6 iisentimitha. Intambo yesisa inesisa kwaye iyaxabiseka, i-3,5 yeemitha iyonke ukuze singabinangxaki zonxibelelwano, ukongeza, yenziwe ngeyiloni eboshiweyo.
Ngokucacileyo ikwanobunzima, kwaye Ibhokisi enezixhobo ezahlukeneyo yongezwa ukuze siyibeke, ngonyawo lwe-silicone, isiphatho senayiloni okanye ngokuthe ngqo sinokuyibeka eludongeni ngokungathi ngumzobo. Singayithenga ngeenguqulelo ezimbini, enye imhlophe / ngwevu kwaye enye imnyama / ngwevu, zombini zinoyilo olufanayo ngokwephaneli yangaphambili, kodwa imibala ibuyisiwe. Ngokumalunga nokuxhonywa eludongeni, kufuneka siqinisekise ukuzinza kwayo, kuba amandla esandi enjalo ukuba mhlawumbi asinakukuthanda.
Sijonga kwiiphaneli, kwaye oku kunomdla. Ngokusebenzisa ezinye izinto zangasemva ezinokucinezelwa ukukhupha ilaphu kwaye singene ngokuthe ngqo kwizithethi zale SYMFONISK. Okwangoku, i-IKEA isinika ithuba lokuba fikelela kuyilo olwahlukeneyo olweshumi elinambini kuzo zombini iwebhusayithi kunye nokufikelela yeevenkile zayo ezibonakalayo ngamaxabiso azakubakho phakathi kwe-16 euro yeenguqulelo ezingabizi kakhulu kunye nee-euro ezingama-35 ezixabisa zonke ezinye. Uyilo lwazo zonke iintlobo kunye nezinto ozithandayo, uyazi, imibala. Ukuyitshintsha, njengoko ubonile, kulula kakhulu kwaye yenye yezona ndawo zayo zinomdla.
Isandi: I-Sonos engaphezulu kwe-IKEA
Ukuba iimveliso zokuqala zeSonos yokusebenzisana ne-IKEA sele ishiye incasa emilonyeni yethu, le igqithile kulindelo lwethu. Ngelishwa khange sikwazi ukufikelela kwiimpawu zobuchwephesha, nangona kunjalo, ngokubona ubukhulu bayo obuphantsi soyika okubi kakhulu. Uloyiko lwethu lwapheliswa kwaye uSonos uphinde wafumanisa kuthi ukuba umlingo unokwenziwa. Isixhobo asishukumi kwizandi eziphantsi, isandi sinamandla, kwaye umthamo uphezulu ngokumangalisayo.
Ukuze ufumane umbono kwinqanaba lokuthelekisa, sifumana iziphumo ezinamandla kancinci kuneSonos One yesiko. Ngaphandle kokulungiswa kwayo, ayingcangcazeli eludongeni okanye inike isandi esaphukileyo. Kwaye ixhasa uNonos 'Trueplay smart protocol yomsindo.
Unxibelelwano kunye nolawulo lokusetyenziswa
Kubalulekile ukuba ukhuphele usetyenziso lweSonos, iyafumaneka kuzo zombini iOS ukuba kunjalo Android ngokupheleleyo ngaphandle kwentlawulo. Apha uya kuba nakho ukumisela ngokukhawuleza isixhobo sakho:
Yidibanise namandla kwaye ulinde i-LED ukuba ikhanye ngokuluhlaza
Vula usetyenziso lweSonos kwaye wamkele izicelo zemvume
Khetha isixhobo sakho seSonos SYMFONISK kwaye wamkele isazisi
I-SYMFONISK iya kukhala kwaye iapp iyakuyiqhagamshela
Ngoku kuya kufuneka ulinde uhlaziyo
Ngoku ungangqamanisa iinkonzo zakho zomsindo kwaye udlale wonke umxholo wakho
Kwenye ye-bezels sinokufikelela kumaqhosha amathathu, eyokudlala / yokunqumama, ethi icofe kabini ize iye phambili ngengoma kwaye ngokuthepha kathathu iya kubuya umva, kunye namaqhosha okulawula ivolumu. Kulabo abane-WiFi ehluphekileyo (sikufundisa ukusombulula ngokululaIkwanayo ne-RJ45 Ethernet network port.
Olunye uphando sijamelene neSonos ngawo wonke umthetho, ukubakho Spotify Qhagamshela, Inkqubo ye-multiroom kunye neenkonzo zokulalelwayo zomsindo ukonwabela. Ngendlela enye, iyafikeleleka nge-Apple HomeKit's AirPlay 2 protocol kwaye kunjalo, kunye ne-IKEA's cast of home systems. Asinaye ewe, ngeemakrofoni ezivumela ukusebenzisana ne-Alexa, iKhaya likaGoogle okanye iSiri, into eyayinokwenza ukuba le ibe yimveliso ejikeleze ngokwenene.
Amava kunye nezimvo zoMhleli
Le SYMFONISK evela kwi-IKEA kunye noSonos indothuse ngokunyanisekileyo. Nangona ingabizi, ijikeleze i-euro ezingama-199, inikeza isandi esifanelana nemveliso ye-Sonos efanayo. Oku kuthetha ukuba ibekwe kakuhle inokuba liqabane elifanelekileyo eofisini, kwigumbi lokulala nakwigumbi lokuhlala, kuba zinokusetyenziswa kwimowudi ye "stereo".
Isandi silunge kakhulu, kunokuba bekulindelwe kwimveliso ye-IKEA, ukuphucula uluhlu ukuba kunokwenzeka. UKUQINISEKISA ukuya kwindawo ebesingayilindelanga. Ithuba lokutshintsha kweepaneli ezahlukeneyo lisimema ukuba senze isitayile sethu kwaye silungelelanise iimfuno zethu, ukuba umntu unokwenza into enjalo, yayiyiSweden IKEA. Yimveliso endiyincomayo ngokunyanisekileyo phambi kwezo nqaba zinesandi ziyindinisa ezihamba namagumbi ethu okufikisa, idityaniswe kakuhle kwaye inikezela ngeempawu ngokwexabiso. Sinike le IKEA SYMFONISK ithuba kwaye siye saphinda sayiphindisela.
Ithunyelwe nge: 4 Agasti 2021
Utshintsho lokugqibela: 3 Agasti 2021
Izinto ezidityaniswe kakuhle kunye noyilo, uphawu lwendlu
Isandi esimangalisa ngamandla kunye namandla
Ixabiso lilungelelaniswe kakhulu kuhlobo lwesixhobo
Akukho microphone ze-Alexa
Akukho ntambo ye-RJ45
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Isakhelo sesithethi se-IKEA SYMFONISK, isandi esingcono kunye noyilo ngakumbi [uphononongo]
Ukunyusa i-SPC Smartee, iswatchwatch ngexabiso elifanelekileyo